Uru nke izu igwe eletriki igwe kwụ otu ebe | ebike Shuangye
Mbido blog News Uru nke ịzụta igwe kwụ otu ebe
Datebọchị ： 2020-08-20 Categories ：News Nlele ： 2,360
na igwe kwụ otu ebe na-ewu ewu nke ukwuu kwa ụbọchị. Ndị mmadụ na-enwekwu mmasị n'ịzụrụ igwe eletrik eletrik. Igwe ndị a na-adị mfe ịnya ebe ndị mmadụ jupụtara. Ọ bụkwa nnukwu ụzọ iji nyere gị aka ịchekwa ahụike gị. Igwe igwe eletrik na-ewu ewu n'ụwa niile. A na-enyere igwe eletrik aka na igwe. Can nwere ike ma gbaa ịnyịnya ígwè gị site na iji pedals ma ọ bụ site na iji trotul, na ụzọ abụọ nwere ike ịkwọ ụgbọala ahụ. Igwe eletriki igwe eletriki eletrik na-eji batrị lithium-ion nwere ike ịgbanye, mejupụtara ihe onwunwe na-adịgide adịgide. Eku nke igwe eletriki igwe eletrik nwere igwe siri ike, dika aluminom. Ugbu a ọtụtụ igwe eletriki igwe eletrik dị elu na-eji aluminum alloy frame.
N'ịtụle ihe egwu dị iche iche nke njem ọha na eze na afọ COVID-19, ịzụta igwe na - enyere aka ịnya ụgbọ ala iji ga - agbagharị ma na - arụ ọrụ n'oge mkpọchi, ebe ị ka na - achọ ịma ọhaneze, ị nọghị naanị gị - ọkachasị n'obodo. Yabụ igwe na - enyere aka n'ụgbọala nwere ike inyere mmadụ aka ma dịkwa ọnụ. Ọ na - emekwa ndị njem njem iji chọọ ụzọ dị iche iche ha ga - esi na - apụ apụ, gbaa gburugburu, ma nwee mmega ahụ. Tụnyere igwe kwụ otu ebe, ọ bụ ezie na igwe kwụ otu ebe igwe eletrik nwere ike ịdị ọnụ, mana e jiri ya tụnyere ụgbọ ala, ọ chọrọ naanị itinye ego na ntinye ego ka ọ bụrụ na ọ na-efu obere oge n'ime ogologo ebe ọ bụ na enweghị ego akwụgo ma ọ bụ ike mmanụ ọkụ. Ka emechara ụgwọ ọkụ igwe eletrik nyere aka, ọ siri ike karịa ego mmanụ ụgbọ ala.
Itinye ego na igwe eletriki igwe eletrik bụ otu nzụta kachasị mma ị nwere ike ịme. Ọ bụrụ na ị na-enwe mmasị ịnya ịnyịnya ígwè ma na-akpọ nsogbu ahụ na ọsụsọ asị, ị na-eche mgbe ịnya ịnya ahụ siri ike dịka ịrịgo ugwu karịa igwe eletriki eletrik maka ọrịre ga-ewepu nsogbu a ma mee ka ọchị laghachi na njem ịnyịnya ígwè gị. Ihe kachasị mma banyere igwe eletriki igwe eletrik maka ọrịre bụ na onye na-agba ya nwere ike ịhọrọ ike ole ha na-eji na ike elektrik ha na-eji. Nke a nwere ike gbanwee ọzọ maka ọfụma ma ọ bụ siri ike. Ọtụtụ ndị bi n’obodo mepere emepe nke na-agbasi mbọ ike ịnya igwe kwụ otu ebe ga-etinye ego na igwe eletriki eletrik maka ọrịre ka ha wee nwee ike ịnụ ụtọ ịma mma nke ịnya igwe, ma ọ bụ maka obi ụtọ ma ọ bụ ebumnuche njem dị mkpa.
Beingnwe ọ toụ na ịnya igwe kwụ otu ebe ebu ọkụ dịkwa mma karịa na mpaghara karịa iji ọgba tum tum, ụgbọ njem ọha ma ọ bụ ụgbọ ala maka njem. Governmentsfọdụ gọọmentị mba na-akwado atụmatụ na-agba ndị mmadụ ume iji igwe kwụ otu ebe ebu ọkụ kama ụgbọala, nke a ga - enye aka belata ikuku ma chekwaa gburugburu ebe ahụ mbibi ụgbọ ala na - akpata. Tobanye na igwe kwụ otu ebe, ma jiri ya kama ịkwọ ụgbọala ga - eme ka ị chekwaa mmanụ ụgbọala, ego mkpuchi, na ụtụ ụzọ, ị ga - akụ ahịrị okporo ụzọ, nke bụ nnukwu uru maka ndị njem.
Ọ bụrụ n’inwe izu ịzụta igwe kwụ otu ebe, enwere igwe ebi ndụ, igwe eletriki ugwu ugwu yana igwe eletriki obodo ịhọrọ dabere n’ihe ịchọrọ. Ọ bụrụ na inwere mmasị na ụgbọ ala eletrik, gaa na anyị Ụlọ Ọrụ Weebụ or Videos.
Tags:igwe eletriki igwe kwụ ọtọ igwe eletriki ụgbọ ala eletriki
Mbụ: Kedu ụdị ọsọ igwe na-agba ụgbọ mmiri elegharịghị anya 750w eletrik na-aga
Next: Etu ịhọrọ igwe kwụ otu ebe maka ịzụrụ nduzi